काठमाडौँ । त्रिभुवन विश्वविध्यालय भुगोल संकायले आइतबार बिदाई कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ ।
एक विशेष कार्यक्रम गर्दै भुगोल विद्यार्थी समाजले बिगत ३२ बर्ष देखि विश्वविद्धालयमा अध्यापन गराउँदै आएका भुगोल विभागका विभागीय प्रमुख प्रा. डा.नरेन्द्रराज खनालको बिदाई गरेको हो ।
२०४३ सालदेखी त्रिभुवन विश्वविद्धालयमा आफ्नो प्रध्यापनको सुरुवात गर्नु आएका खनालले आज ६३ बर्षे उमेर हदका कारण अवकास पाएका हुन । विश्वविद्धालयमा ६३ बर्ष मा अनिवार्य अवकास पाउने प्रब्धान रहेको छ ।
कार्यक्रमलाई सम्धवोन गर्दै प्रमुख अतिथी सुवेदीले भुगोल संकायको गुम्दै गरेको प्रतिस्ठा उकास्न खनालले महत्वपूर्ण भुमिका निर्बाह गरेको बताए । उनले भुगोल विद्यार्थी समाजले विभिन्न रचनात्मक कार्यक्रम गर्दै आएको भन्दै धन्यवाद दिएका थिए।
यस्तै बिदाई भएका विभागिय प्रमुख प्रा। डा। खनालले आजबाट आफ्नो कानुनी सम्बन्ध सकिए पनि भुगोल केन्द्रीय बिभाग र विश्वविद्धालय सँगको आत्मिक सम्बन्ध सधैँ रहिरहने बताए । उनले अब आफू विभिन्न अनुसन्धात्मक कार्यमा लाग्दै आफ्नो सीप र अनुभव रास्ट्र हितमा समर्पण गर्ने बताए ।
बिदाई कार्यक्रममा केन्द्रिय भुगोल बिभागका सम्पुर्ण प्राध्यापकहरु, कर्मचारी तथा विद्यार्थीहरुको सहभागिता रहेको थियो । उक्त अबसरमा समाजले उनलाई मायाको चिनो उपहार दिएको थियो भने बिभागको हाताभित्र सम्झना स्वरुप रुद्राक्षको रुख समेत रोपिएको भुगोल विद्यार्थी समाजको सचिब विशाल ज्ञावालिले जानकारी दिए ।
काठमाडौँ । त्रिभुवन विश्वविद्यालयले स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन (स्ववियु) निर्वाचनको तयारी थालेको छ । आगामी फागुन महीनामा स्ववियु निर्वाचन गर्न तयारी गरिएको त्रिवि विद्यार्थी कल्याण तथा खेलकूद निर्देशनालयका कार्यकारी निर्देशक गङ्गाबहादुर थापाले
त्रिवि प्राध्यापक संघ किर्तिपुरमा प्रा.डा. मोतीलाल शर्माले नेतृत्व गरेको प्रगतिशील समुह विजयी
काठमाडौँ। त्रिभवुन विश्वविद्यालय केन्द्रीय क्याम्पस किर्तिपुरमा शुक्रबार त्रिवि प्राध्यापक संघको निर्वाचनमा लोकतान्त्रिक प्रगतिशील समुह विजयी भएको छ । लोकतान्त्रिक प्रगतिशील र प्रजातान्त्रिक समूह विचको कडा प्रतिस्पर्धामा प्रा.डा. मोतीलाल शर्मा भूसालले नेतृत्व
त्रिविद्वारा सूचनाको हक हनन
काठमाडौँ । देशकै ठूलो शिक्षण संस्था त्रिभुवन विश्वविद्यालयको रजिष्ट्रार कार्यालयले सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन र संविधानको बर्खिलाप हुने गरी नागरिकको सूसुचित हुन पाउने हकको हनन गरिरहेको छ । प्रत्येक नागरिकलाई आफ्नो वा
त्रिवि चीनको ‘बेल्ट एण्ड रोड’ अन्तर्राष्ट्रिय विज्ञान सङ्घको गभर्निङ बोर्डको सदस्यमा निर्वाचित
काठमाडौँ। चीनको ‘बेल्ट एण्ड रोड’ अन्तर्राष्ट्रिय विज्ञान सङ्घको स्थापना सम्मेलनले त्रिभुवन विश्वविद्यालयलाई गभर्निङ बोर्डको सदस्यमा निर्वाचित गरेको छ । यही कात्तिक १७ देखि १९ गतेसम्म चीनको राजधानी बेइजिङमा आयोजना गरिएको